Vietnam waxay dib u furtay jasiiradda Phu Quoc si ay si buuxda u talaalaan dalxiisayaasha ajnabiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabinta Vietnam » Vietnam waxay dib u furtay jasiiradda Phu Quoc si ay si buuxda u talaalaan dalxiisayaasha ajnabiga ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Jabinta Vietnam
Vietnam waxay dib u furtay jasiiradda Phu Quoc si ay si buuxda u talaalaan dalxiisayaasha ajnabiga ah.
Dhammaan xubnaha shaqaalaha ee ka shaqeeya xarumaha adeegga jasiiradda iyo 99% dadka waaweyn ee Phu Quoc ayaa si buuxda looga tallaalay fayraska COVID-19.
Jasiiradda fasaxa ee Vietnam ee Phu Quoc soo dhaweeyay in ka badan 200 oo dalxiisayaal ah oo si buuxda u talaalan oo ka socda Kuuriyada Koonfureed maanta.
Booqdayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa ah dalxiisayaashii ugu horreeyay ee ajnabi ah oo taga Vietnam tan iyo markii waddanku xidhay xudduudihiisa ku dhawaad ​​​​laba sano ka hor si loo joojiyo faafitaanka caabuqa coronavirus.
Vietnam xidhay xuduudaheeda March 2020, wax yar ka dib markii la xaqiijiyay kiiskeedii ugu horreeyay ee COVID-19 ee la soo sheegay.
Tan iyo markaas, Vietnam loo ogolyahay dhowr duulimaad oo caalami ah todobaadkii oo ay la socdaan khubaro shisheeye, diblomaasiyiin iyo muwaadiniin Vietnamese ah oo soo laabanaya.
Soogalootiga caalamiga ah waa inay maraan karantiil 14 maalmood ah hoteellada loo qoondeeyay ama xarumaha ay dowladdu maamusho.
Maanta, dalxiisayaasha Kuuriyada Koonfureed ee si buuxda loo tallaalay ayaa laga tijaabiyay COVID-19 markii ay yimaadeen, oo marka natiijooyinka xun la soo celiyo, waxay ku raaxaysan karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee jasiiradda iyada oo aan la karantiilayn 14 maalmood ah oo qasab ah.
Soo-booqdayaasha Kuuriyada Koonfureed waxay awood u yeelan doonaan inay si xor ah ugu raaxaystaan ​​daawashada, dukaamaysiga iyo munaasabadaha madadaalada ee u baahan shahaadooyinka tallaalka.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka ee Vietnam, dhammaan xubnaha shaqaalaha ee ka shaqeeya xarumaha adeegga jasiiradda iyo 99% ee Phu QuocDeganeyaasha qaangaarka ah ayaa si buuxda looga tallaalay fayraska COVID-19.
Jasiiradda ayaa sidoo kale qorshaynaysa in la tallaalo carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 jir bisha soo socota.
Vietnam waa waddankii ugu dambeeyay ee Aasiya ee ku biiray Thailand, Indonesia iyo Malaysia si ay dib ugu furaan xuduudahooda si ay si buuxda u tallaalaan booqdayaasha ajnabiga ah.
Thailand ayaa ahayd tii ugu horeysay ee bilawday inay ogolaato tirada xaddidan ee booqdayaasha ajnabiga ah ee si buuxda u tallaalay jasiiradda Phuket ka hor inta aysan ku fidin aagagga kale, oo ay ku jirto Bangkok, laga bilaabo Noofambar 1.
Jasiiradda dalxiiska ee Bali ee Indonesia ayaa u furtay imaatinka bishii hore iyada oo leh xoogaa xaddidaad ah oo ay ku jiraan baaritaan iyo karantiil hoteel shan maalmood ah.
Malaysiya waxa ay jasiiradda Langkawi ka furtay barnaamij tijaabo ah oo 'COVID-19 xumbo' ah.